YEEHAA PRINTING CO., LTD. е еден од реномирани производители, добавувачи и извозници на <strong>ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်</strong>, со една фабрика во Taiwan. Со години на работно искуство во линија на одлуки, ние се познати за нашите извонредни перформанси во индустријата. Ние се помогна како една од водечки бренд во Taiwan. Ние постојано се надградуваме нашите производи да ги исполнуваат меѓународните стандарди. Ние сме тим од професионалци, кој предвидува навремени испораки со висок quality.Our искреноста и им помогна на напорна работа ни одговара нашиот квалитет со меѓународните стандарди.
YEEHAA PRINTING CO., LTD. ၏ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းရောင်းသူနှင့်ပို့ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်, အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. အောင်လိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်း၌အကြှနျုပျတို့၏ထူးခြားပြောင်မြောက်သောစွမ်းဆောင်မှုကြောင့်လူသိများကြသည်။ ကျနော်တို့အတွက်အဓိကဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်၏တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကူညီပေးခဲ့ Taiwan. ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူအချိန်ပေးပို့အပေါ်ထောက်ပံ့သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ဖိကိုင်ထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီကူညီပေးခဲ့သည်။